चार महानगर र एक उपमहानगरमा कहाँ कसको अग्रता, कति मत गनियो?
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा सबैभन्दा चासोको रूपमा हेरिएका चार महानगर र एक उपमहानगरपालिकामा मतगणना जारी छ। सबै स्थानीय निकायमा करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मतगणना सकिएको छ।
काठमाडौंको काठमाडौं महानगरपालिका, कास्कीको पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, र ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका सहित मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका सबै भन्दा बढी मतदाता भएका स्थानीय तहसमेत हुन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यी सबै जिल्लामा ७२ प्रतिशत भन्दा बढी मत खसेको छ। जसअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा २ लाख ७९ हजार ३ सय ५ मतदाता छन् भने पोखरा लेखनाथमा १ लाख ६८ हजार ६८, भरतपुरमा १ लाख ५० हजार २ सय ७४ र ललितपुर महानगरमा १ लाख १२ हजार ९ सय २३ मतदाता छन्। त्यस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ८३ हजार ६ सय ३५ मतदाता छन्।
निर्वाचन आयोगले काठमाडौं, ललितपुर र कास्कीमा ७५ प्रतिशत तथा चितवन र हेटौंडामा ७० प्रतिशत मतदान भएको आयोगले जनाएको छ।
शुक्रबार बिहानसम्मको मतगणना अनुसार ललितपुर महानगरपालिकामा करिब ५० प्रतिशत मतगणना भए पनि अन्यमा ३० प्रतिशत पनि मतगणना भएको छैन।
कहाँ कति गणना?
२ लाख ७९ हजार मतदाता रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा खसेको ७५ प्रतिशत मतलाई आधार मान्दा औसत २ लाख १६ हजार मत खसेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङकमा उल्लेख छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म करिब ३१ हजार मात्र मत गणना भएको छ। यो खसेको मतको करिब १३ प्रतिशत मात्रै हो। अझै धेरै मत गन्न बाँकी छ। ११ ठाउँबाट मत गणना भए पनि मत परिणाम सार्वजनक हुने क्रम एकदम सुस्त छ।
नेकपा एमाले १०५१९
अहिलेसम्म पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकामा २८ हजार मतगणना भइसकेको छ। यो समग्र मतको २२ प्रतिशत मात्रै गणना हो। अझै यहाँ पनि धेरै मत गन्न बाँकी नै छ।
१ लाख ५० हजार २ सय ७४ मतदाता रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा ७० प्रतिशत मत खसेको छ। अर्थात १ लाख ५ हजार खसेको मत मध्ये अहिलेसम्म २६ हजार मत गणना गरिएको छ। यो जम्मा २४ प्रतिशत मात्र हो। अझै यहाँ पनि तीन चौथाई मतगणना बाँकी छ।
सबैभन्दा छिटो मतगणना भएको महानगरमध्ये ललितपुर एक हो। १ लाख १२ हजार ९ सय २३ मतदाता रहेको ललितपुर महानगरपालिकामा ७५ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ। जस अनुसार ८५ हजार मतदाताले मत खसालेका छन्। यसको अहिलेसम्म झण्डै ४३ हजार मतगणना भइसकेको छ।
यो अनुसार झण्डै ५१ प्रतिशत मतगणना भइसकेको ललितपुरमा सबैभन्दा छिटो मत परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको छ।
१३२१६ साझा पार्टी
हेटौंडा ८३ हजार ६ सय ३५ मतदाता रहेको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक मात्र उपमहानगरपालिका हैटौंडामा हो।
७० प्रतिशत मत खसेको हेटौंडामा ५८ हजार ५ सय ४४ मत खसेको हो। ‍यहाँ अहिलेसम्म १६ हजार मत गणना भइसकेको छ। यो खसेको मतको जम्मा २७ प्रतिशत मात्रै हो।
शुक्रबार, जेठ ५, २०७४ १२:३६:५१